Zimhambela kahle izinto uLucia Mthiyane
U-LUCIA Mthiyane zibukeka zimhambela kahle izinto kulezi zinsuku njengoba ubuso bakhe bulokhu buvele njalo emidlalweni ehlukene. Namhlanje uzobe eqala ukubonakala emdlalweni, iDurban Gen ku-e.tv. ISITHOMBE: TWITTER
KUBUKEKA zimhambela kahle izinto emkhakheni wokulingisa kulezi zinsuku uLucia Mthiyane njengoba esejoyine umdlalo, iDurban Gen.
U-Lucia, ozobe elingisa indawo ka-Albertina Cele kulo mdlalo, uzoqala ukubonakala namhlanje.
Kulo mdlalo uzofika njengoba kusanda kudlula emhlabeni udadewabo ogane kwaGumede, uMaCele (Monica Thuli Zulu), noshone emuva kokuphatheka kabi kwase kuthinteka inhliziyo ngenxa yezigemegeme ebezenziwa ngumyeni wakhe uBab’Gumede (Sifiso Sibiya).
Ngokwesitatimende esithunyelelwe abezindaba, u-Albertina ungowesifazane ozimele nongekho ntekenteke, oyimelayo into ayenzayo.
“Ungowesifazane wasemakhaya okholelwa ukuthi kukhona isizathu esimenza abe okhethekile futhi kumele aphathwe ngendlela ephezulu noma yikuphi la aya khona. Ungowesifazane okwazi ukubona abantu ukuthi banjani esanda kuhlangana nabo, engakabazi kahle kodwa avele asho nje ukuthi lo muntu asembonile unjani futhi uphila impilo enjani. Imibono yakhe ayishintshi noma abantu bangamtshela okwehlukile, uma nje isinqumo esesithathile ngaleyo nto kusuke sekuphelile futhi engeke esawushintsha umqondo,” kuchaza isitatimende.
Kulo mdlalo uzofika kwaGumede esezizwa ngenye indlela ngoBab’ Gumede futhi ngesikhathi behlangana okokuqala kula kuqala khona ingxabano yabo bobabili.
Kulo mdlalo uMaCele ungomunye wabalingisi abasazonyamalala kuwona.
Kuyimanje ungomunye wabalingisi abasanda kubonakala emdlalweni omusha othi Lingashoni ku-1Magic (103).
Abanye abalingisi abasazonyamalala kulo mdlalo kubalwa uNtando Mncube, Lihle Dhlomo noSifiso Sibiya.
Engxoxweni yakhe neSolezwe muva nje, uLucia uveze ukuthi ukujabulele ukubuya ekulingiseni njengoba eke wavela nakuDiep City isaqala.